नेपाललाई घातक बन्न सक्ने नेदरल्यान्ड्सका तीन खेलाडी | Hamro Khelkud
नेपाललाई घातक बन्न सक्ने नेदरल्यान्ड्सका तीन खेलाडी
दुवै टोली त्रिकोणात्मक सिरिजमा विजयी सुरुवात गर्न चाहन्छन् । नेपालको कप्तानी ज्ञानेन्द्र मल्ल र नेदरल्यान्ड्सको पिटर सीलारले गर्ने छन् । नेपाल र नेदरल्यान्ड्सबीच अन्तिम पटक प्रतिस्पर्धा २०१९ अक्टोबर ७ मा भएको थियो ।
ओमानमा सम्पन्न पाँच टोली बीचको टि२० आई सिरिजमा यी दुई टोलीले खेलेका थिए । नेपाल र नेदरल्यान्ड्सबीच ६ टि२० आई खेल हुँदा नेदरल्यान्ड्स ३ मा जित र २ मा पराजित भएको छ । नेपाल घरेलु समर्थक र मैदानको फाइदा उठाउँदै विजयी सुरुवात गर्न चाहँन्छ । यता बलियो टोली नेदरल्यान्ड्स उत्कृष्ट प्रदर्शनका साथ जित निकाल्ने सोचमा छ ।
नेपाल भ्रमणमा नेदरल्यान्ड्सका प्रमुख खेलाडी भने छैनन् । नेदरल्यान्ड्सले आफ्ना युवा खेलाडीलाई मौका दिएको छ । नेदरल्यान्ड्सका डच तथा प्रमुख हतियार रयान टेन डेस्काटे, रोलेफ भान डर मर्वे, शीर्षक्रमका ब्याट्सम्यान वेस्ले ब्यारेसी, तीव्र गतिका बलर ब्रान्डन ग्लोभर, फर्द क्लासेन र अलराउन्डर मिचल रिपन जस्ता खेलाडी टोलीमा छैनन् । केहि सरप्राइज प्याकेज बन्न सक्छन् ।
१७ वर्षिय स्पिनर अलराउन्डर अर्यान दत्त नेदरल्यान्ड्सको टोलीमा छन् । दत्त स्पिन बलिङसँगै मध्यगति र राम्रो ब्याटिङको क्षमता राख्छन् । उनले नेदरल्यान्ड्सबाट यू१९ खेलि सकेका छन् । नेपाल स्पिनर सहयोगी हुँदा पनि उनलाई टोलीमा समेटेको अनुमान छ । नेदल्यान्ड्सको टोलीमा केहि यस्ता खेलाडी छन् जसले प्रमुख खेलाडी विनानै नेपाललाई घरेलु मैदानमा स्तब्ध पार्न सक्छन् ।
नेपाललाई घातक बन्न सक्ने नेदरल्यान्ड्का प्रमुख ३ खेलाडी ।
३. म्याक्स ओडोवड
२७ वर्षिय ओपनर म्याक्स ओडिवड नेदरल्यान्डसका ओपनर ब्याट्सम्यान हुन् । म्याक्स ओडोवडले सन् २०१५ मा घरेलु मैदानमा नेपालसँगको दोस्रो टि२० आई खेलमा डेब्यू गरेका थिए । उनी आक्रामक ब्याटिङका लागि परिचित छन् । लगातार राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
टोलीको आवश्यकता अनुसार मध्यक्रममा पनि ब्याटिङ गर्न सक्छन् । तर उनी क्रिजमा टिक्नु नेपालको लागि भने घातक सावित हुन सक्छ । उनले ३६ टि२० आई खेलमा ६ अर्धशतक सहित ८ सय ६६ रन बनाई सकेका छन् । २०१९ मा उनले एकै वर्षमा २४ टि२० आई खेलमा ७ सय २ रन बनाएका थिए । जिम्मेवारी ब्याटिङका साथ ठूलो इनिङ खेल्दै टोलीलाई सहज जित दिलाउन सक्छन् ।
२. पाउल भान मिकेरेन
तीव्र गतिका बलर पाउल भान मिकेरेन ब्याटिङ र बलिङ दुबैमा उत्कृष्ट प्रदर्शनका साथ टोलीलाई सहज जित दिलाउन सक्ने म्याच विनर खेलाडी हुन् । पाउल भानले लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । विदेशी फ्रेन्चाइज लिग पनि खेल्दै आएका छन् । अर्कोतर्फ नेपाल भ्रमणको टोलीमा आएको नेदल्यान्ड्सको टोलीमा पाउल भान मिकेरेन टियु मैदान बारे राम्रो जानकार भएका खेलाडी हुन् । जसले उनलाई उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न र टोलीलाई रणनीति बनाउन सहज हुन सक्छ ।
पाउल भानले सन् २०१८ मा एभरेष्ट प्रिमियर लिग (इपिएल) विराटनगर वारियर्सबाट खेलेका थिए । अर्कोतर्फ उनी निकै अनुभवी खेलाडी पनि हुन् । २०१३ देखि नेदरल्यान्ड्सको टोलीबाट लगातार खेल्दै उच्च प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनले ४१ टि२० आई खेलमा ४७ विकेट लिएका छन् । तल्लोक्रममा राम्रो ब्याटिङको क्षमता राख्छन् ।
१. पिटर सीलार
नेदल्यान्ड्सका कप्तान पिटर सिलार एक उत्कृष्ट अलराउन्डर हुन् । मध्यक्रममा ब्याटिङ गर्ने सीलार ठूलो र आक्रामक इनिङको लागि परिचित छन् । स्पिन बलिङ गर्ने सिलार नेदरल्यान्ड्सबाट टि२० आईमा सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडी हुन् । ६९ खेलमा सिलारले ५३ विकेट लिएका छन् । इकोनमी ७ भन्दा कम छ ।
ब्याटिङतर्फ सिलारले ४० इनिङमा ४ सय ६४ रन बनाएका छन् । सीलार अनुभवी खेलाडी हुन् । जसले दबाबमा पनि उच्च प्रदर्शन गर्न सक्छन् । अर्कोतर्फ टियु स्पिनर उपयोगी हुँदा उनले त्यसको फाइदा उठाउन सक्छन् । शीर्षक्रम र मध्यक्रम असफल हुँदा पनि आफ्नो उच्च प्रदर्शनमा टोलीलाई बलियो योगफलमा पुर्याउन सक्ने क्षमता राख्छन् ।
नेदरल्यान्ड्सको टोली : पिटार सीलार (कप्तान), टोबियस भिसे, बेन कुपर, म्याक्स ओडिवड, बास डी लीडे, विक्रमजित सिंह, स्कर्ट एडवार्डस, आर्यन दत्त, फिलिपे बोइससेवेन, पल पान मीकेरन, भिभिन किंगमा, टोनी स्टल, सेबस्टियान ब्राट र जुलियन डी म